Забур 27 CARS - Nnwom 27 ASCB
1Awurade ne me hann ne me nkwagyeɛ;
hwan na mensuro no?
Awurade ne me nkwa ahoɔden,
na hwan anim na me ho mpopoɔ?
2Sɛ nnipa bɔne toa me
pɛ sɛ wɔkum me a,
sɛ mʼatamfoɔ to hyɛ me so a
wɔbɛsuntisunti ahwehwe ase.
3Sɛ dɔm mpo twa me ho hyia a,
mpo sɛ wɔtu me so sa a,
ɛno mu koraa na menya awerɛhyɛmu.
4Adeɛ baako na mebisa Awurade;
na ɛno na mehwehwɛ;
sɛ mɛtena Awurade fie
me nkwa nna nyinaa,
na mahwɛ Awurade ahoɔfɛ
na mahwehwɛ no wɔ nʼasɔrefie.
5Wɔ hia ɛda mu no
ɔde me sie nʼatenaeɛ;
ɔkora me wɔ Ahyiaeɛ Ntomadan mu.
Ɔde me si ɔbotan so wɔ ɔsorosoro.
6Afei ɔbɛma me tiri so
wɔ atamfoɔ a wɔatwa me ho ahyia no so;
mede anigyeɛ bɛbɔ afɔdeɛ wɔ nʼAhyiaeɛ Ntomadan mu;
na mɛto dwom, ahyehyɛ nnwom ama Awurade.
7Ao, Awurade, sɛ mesu frɛ wo a, tie me!
Hu me mmɔbɔ na gye me so!
8Mʼakoma ka wɔ wo ho sɛ, “Hwehwɛ nʼanim!”
Wʼanim, Ao Awurade na mɛhwehwɛ.
9Mfa wʼanim nhinta me,
mfa abufuo mpamo wo ɔsomfoɔ
me ɔboafoɔ ne wo.
Mpo me na nnya me,
Ao me Nkwagyeɛ Onyankopɔn.
10Mʼagya ne me maame bɛgya me hɔ deɛ,
nanso Awurade bɛgye me.
11Kyerɛ me wʼakwan, Ao Awurade;
fa me fa ɛkwan tee so,
me nhyɛsofoɔ enti.
12Nnyaa me mma sɛdeɛ mʼatamfoɔ pɛ,
adansekurumfoɔ sɔre tia me
na wɔpu awurukasɛm.
13Meda so wɔ saa anidasoɔ yi sɛ:
mɛhunu Awurade ayamyɛ
Hyɛ wo ho den na ma wo bo nyɛ duru
na twɛn Awurade.
ASCB : Nnwom 27